Ivo Escapists, mutambo uyo uchakubata iwe kunyangwe chinangwa chayo ndechekuti iwe utize | IPhone nhau
Escapists, mutambo uyo uchakubata iwe kunyangwe chinangwa chayo chiri chekuti iwe utize
Sezvo iwe uchinyatso kuziva, muActualidad iPhone tinoda kutora kufamba kwakanaka kuburikidza neApple App Chitoro nguva nenguva nechinangwa chekutsvaga nhau dzichangoburwa, kuti tikwanise kuuya nadzo kwauri uye kuti unakidzwe nemabatiro eIOS yako. mudziyo uvatumire. Nekudaro, isu takashamiswa zvinonakidza nemutambo uyu urikuratidza kuve unobudirira muchikamu chayo. Izvo zvinopera pasina kutaura kuti kusiyana pane dzimwe nguva, nhasi tiri kuzotaura nezve mutambo usiri wemahara, asi kana mutambo wacho uchinge wakakodzera, hazvimbokuvadza kudonhedza mashoma maeuro. Ipapo ngatizivanei The Escapists, mutambo uri kuratidza kubudirira muApple App uye isu tichaenda kukuudza kuti sei.
Zvichida chinhu chekutanga chinobata pfungwa dzedu mumutambo uyu wakagadzirwa na Team17 Software Iyo yayo 8Bits kumisikidza iyo yatinowana seinofadza sezvo iri inofadza. Ivo havadi kuti iwe urasike pakati peyekushamisa mifananidzo, ivo vanongoda kuti iwe uve nenguva yakanaka kutamba uye kufunga zvakaoma.
Ivo Escapists ndeye yakavhurika nyika jeri ruzivo uko iwe kwaunowana zvakasiyana siyana zvinhu zvekugadzira uye nekubatanidza pane yako yekuda rusununguko. Hupenyu hwemujeri hunodzivirira zvirongwa zvako zvekupukunyuka nemitemo yazvo yakaoma ... Tyora mitemo! Varindi vanoedza kukanganisa chero hurongwa hwekupukunyuka, saka uchafanirwa kudzivirira chero hunhu hunokatyamadza: edza kuzvizivisa pakudaidzwa, tsvaga basa mutirongo uye uvanze zvinhu zvekuba
Sezvatakambotaura, mutambo unodhura 3,99 euros muApple App, zvisinei, kusvika parizvino yawana hapana pasi pe4,5 nyeredzi chiyero, iyo isiri "mucus turkey" ichifunga zvinodiwa nevatengi venzvimbo yeIOS. Muchidimbu, hauzombozvidemba neiyi 310MB mutambo watakaedza uye kuda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Escapists, mutambo uyo uchakubata iwe kunyangwe chinangwa chayo chiri chekuti iwe utize
Mitambo mishanu yakasarudzika yekutenderera pane yako iPhone
Statistics dzinoti Apple inorasikirwa neshiri mune dzidzo